Cherry Mask – MM Online Shopping
Author: Cherry Mask
Penis Pump Feedback
2019-09-28 Cherry Mask0 comment
2019-07-23 Cherry Mask0 comment
MM online shopping page review လေးပါဗျာ ..
2019-06-13 2019-07-20 Cherry Mask0 comment
cheat on onlineshopping
2019-04-20 Cherry Mask0 comment
အခုတလော page ကို ငွေလွဲပြီး ပစ္စည်းမပို့တဲ့ တခြားosတွေ့ နည်းနည်းများလာလို့ ကိုယ် cu တွေ့လာလာပြောကြလို့ ကျွန်တော် သိသလောက် ၁ ငွေလွဲပါက လိုအပ်တဲ့အချက်အလက် ၊ ၂ page အမှန်ဟုတ်မဟုတ် စစ်နည်း ၃ အလိမ်ခံထိပါက လုပ်နိုင်သောအရာများ ကို မျှဝေပေးပါရစေ ပစ္စည်းရငွေချေစနစ်က အကောင်းဆုံးပါ ဒါပေမယ် os အများကတော့ နယ်ဆို ငွေကြိုလွဲစနစ်ကို သုံးနေတုန်းပါ MM အပါအ၀င်ပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နယ် cu အများစုက ပစ္စည်းရောက် ငွေချေစနစ်နဲ့ မှာယူပြီး ပစ္စည်းမယူကြတာရှိလို့ပါ ငွေကြိုလွဲ စနစ် နဲ့မိတ်ဆွေက လွဲတော့မယ်ဆိုရင် ၁ page သက်တမ်းကို ကြည့်ပါ ဒါလည်း နောက်ပိုင်းမှာ မခိုင်မာတော့ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ လိမ်တယ်လို့ နာမည် ကြီးနေတဲ့ page ၁ခုဆိုရင် 2015 ကတည်းကပါ (ဒီမှာ ကျွန်တော် စဉ်းစားလို့မရတာက အလိမ်ခံ၇တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ့က page ကိုဘာလို့ report မထုတာပါလိမ့်လို့ (အလုပ်ရှုပ်မခံချင်တာလား ဒါမှမဟုတ် မသိတာလား မပြောတတ်ပါ ) ၂။ ငွေလက်ခံမယ်သူရဲ့ နာမည် ၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ၊bank acc တောင်းပါ အခုနောက်ပိုင်းကတော့ bank acc or wave ပဲပေးကြတာများပါတယ်…
MM နှင့် preorder အမှတ်တရများ
ကျွန်တော် preorder ၂ကြိမ်လုပ်ဖူးတယ် ပထမ၁ခါက သတ်မှတ်ရက်ထက် ၂ပတ်ကျော်အောင် နောက်ကျတယ် အဲဒီတုန်းကတော့ deposit မယူထားဘူး ဖုန်းဆက်ပြီးလှမ်းတောင်းပန်ပြီး ပစ္စည်းပို့လိုက်တယ် ဒုတိယအကြိမ် လုပ်တယ် အ၀တ်အစားလေးပါ ပုံပါအတိုင်းနဲ့ တလွဲဖြစ်လာလို့ ကျွန်တော် ဖုန်းဆက်တောင်းပန်ပြီး ပစ္စည်းတွေ့ကို ဒီအတိုင်း ချောင်ထဲ ထည့်ထားတာ သိပ်တောင်မကြာသေးဘူးး feb ကပဲ .. အိမ်မှာတောင်ရှိသေးတယ်အ၀တ်အစားတွေ့လာယူလို့ရတယ် အဲဒီကတည်းက လက်မခံတော့ တာ တာဝန်ကြီးတယ်လို့ယူဆမိလို့ … ပြီးတော့ နောက်တချက်က preorder , prepaidက cu ဘက်ကနေကြည့်ရင် ၁အချက်က cu ကို deposit ငွပေးပြီး ၃ပတ်အတွင်းလို့ပြောပေးမယ် ရက်အတိအကျ မသိနိုင်တဲ့အတွက် သတ်မှတ်ရက်ထက်ပိုကြာသွားရင် အားနာလို့ပါ နောက်၁ချက်က ငွေပေးပြီး အကြာကြီးစောင့်နေရတဲ့အတွက် os ဘက်ကကော လိမ်သွားမလာလို့ cu စိုး၇ိမ်နေမှာစိုးလို့ပါ ။။ ၃အချက် မှာပြီးမှာ ပုံပါအတိုင်းမဟုတ်ရင် ၂ဦး၂ဖက် မျက်နှာပျက်ရမှာကို မလိုလားလို့ပါ … os ဘက်က ပြန်ကြည့်ရင်လည်း ၁ အချက်က. preorder item က လူတဦးတယောက်အတွက် သီးသန့်မှာပေးရတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး မှာယူပြီး အကြောင်း…
ကျွန်တော်ရဲ့ ယနေ့ feeling
တခါတလေ စိတ်ထဲမှာအရမ်းစိတ်ရှုပ်မိတယ် ဒီလုပ်ငန်းကို ဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလား ၊ရပ်တန့်ပြီး တခြားအလုပ်ကိုပြောရင်ကောင်းမလား…. ကျွန်တော်ရဲ့ စီးပွါးရေးမိတ်ဆွေတချို့ကတော့ ကျွန်တော်ကို အကြံပေးပါတယ် တခြားခိုင်မာတဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း ၁ခုကို အခြေချလုပ်ကိုင်ဖို့ ၃ယောက်မေးရင် ၃ယောက်စလုံးအဲလို့ပြောကြတယ် … သူတို့ပြောတာလဲမမှားဘူး ဒီလုပ်ငန်းက အစကတော့ ဘုစ်လုပ်လို့ရတော့ အဆင်ပြေတယ် .. ဟောအခု ဘုစ်လုပ်လို့မရတော့ဘူး… မနေ့ကဆိုရင် mmonlineshopping ၀က်ခ်ဆိုဒ် ရေးထားတဲ့ ပိုစ် ၊ ဗီဒီယို အကုန်ဖျက်ခံထိတယ် …. ပြောရရင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရတဲ့ နယ်ပယ်က တဖြည်းဖြည်းကျဉ်းလာတယ်.. ကျွန်တော်instagram မှာလည်း စကြိုးစားကြည့်တယ် …ဒါပေမယ်mmonlineshopping ၀က်ခ်ဆိုဒ် ကိုရေးပြီး တယောက်ယောက်ကို msg ပို့လို့မရဘူး post တင်လို့မရဘူး … အခက်အခဲ ကြုံတိုင်း ရပ်တန့်ရမလားဆိုတာကို အမြဲစဉ်းစားမိတယ် အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ဘုစ်လုပ်လို့မရတော့ရောင်းအားက၁၀က်လောက်ကျသွားတာတော့ အမှန်ပဲ အခု website တောင်ပို့လို့မရဘူးဆိုတော့ ရှေ့ဆက် ဘာဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိသေးဘူး ကျွန်တော်ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်ထားတာကတော့ နောက် ၁၀နှစ် လောက်နေရင် ဒီပစ္စည်းတွေ့က အကုန်တရားဝင်ဖြစ်လာမယ် အဲဒီအချိန်အထိ တောင့်ခံထားနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ် … ဒါပေမယ် ဒီ ၁၀နှစ်ဆိုတဲ့ ကာလမတိုင်ခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ တကယ်ပဲ တောင့်ခံနိုင်ပါမလား… အကိုတယောက်ကတော့ ဥပမာပေးပါတယ် ပင်လယ်ထဲမှာ မျောနေတဲ့ ဆင်သေကောင်တကောင်ဆိုပါတော့ အဲဒီဆင်သေကောင်အသားကို ကျီးကန်းက စားတယ် ဆင်သေကောင်ကလည်း တဖြည်းဖြည်း ပင်လယ်ထဲကို…